७ बार मध्ये यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् साह्रै भाग्यमानी, तपाई कुन बारको ? | Rochak
September 16, 2021 NepstokLeaveaComment on ७ बार मध्ये यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् साह्रै भाग्यमानी, तपाई कुन बारको ?
सबै मानिसको जन्म कुन्डली जन्मबार र समय अनुसार निर्माण गर्ने गरिन्छ।
जन्मबार र जन्मेको समय निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्मेको बारलाई ग्रहले निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको भने सोमबार चन्द्र ग्रहको हो।
आईतबारः आइतबार जन्मने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । उक्त बार जन्मने व्यक्तिको आयु पनि लामो हुने गर्छ । कम बोल्ने भएकाले शिक्षामा समेत अब्बल हुने गर्छन् । उनीहरुले घर परिवारलाई खुसी राख्न निकै प्रयास गरिरेहेका हुन्छन । यो दिन जन्मेका व्यक्तिलाई २० देखि २२ वर्ष सम्मको उमेरमा निकै कष्ट हुने गर्छ । उनीहरु दान पुण्य गर्न निकै अग्रसर हुने भएकाले उनीहरुलाई २२ वर्ष पछि अत्याधिक धन लाभ हुने योग रहेको छ ।
सोमबारः बोलिमा निकै मिठास भएका व्यक्तिहरु सोमबार जन्मेका हुन्छन् । यस दिन जन्मने व्यक्तिको भागमा दुख सुख बराबर जस्तै हुने गर्छ । उनीहरुमा निकै कला गला शिक्षामा पनि अगाड हुने भएकाले बहादुर हुने गर्छन् । उनीहरुको लागि ९, १२, २७ वर्षमा निकै कष्ट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सोमबार जन्मने व्यत्तिलाई श्वासप्रश्वासको रोग लाग्ने सम्भावना रहेको हुन्छ ।